Labada Volcano Sprint ee Etna ilaa Vesuvius ayaa daboolaya 1,180 km waxayna ka gudubtay 26,000 m - dieselboss
Labada Volcano Sprint ee Etna ilaa Vesuvius ayaa daboolaya 1,180 km waxayna ka gudubtay 26,000 m
Labada Volcano Sprint, oo lagu naanayso «arxan daran», waa tartan baaskiil wadista adkaysiga hal-heer ah kaas oo qaada dadka raaca 1,180 km oo dhererkiisu ka badan yahay 26,000 mitir oo u dhexeeya labada foolkaanaha ee ugu caansan Talyaaniga.
Tartanku wuxuu ka bilaabmaa magaalada Nicolosi Oktoobar 15-keeda saacada 5-ta aroornimo ee cagteeda Mount Etna wuxuuna dhamaanayaa meel ka baxsan Ercolano, oo ku xigta Vesuvius.
100 orodyahan ayaa u dagaalamaya taajka iyo si ay ugu dabaaldegaan finalka waa inay ku dhameeyaan koorsada 110 saacadood gudahood.
Tartankan oo ay soo qabanqaabisay Juliana Buhring oo ah baaskiilad aad u adkaysi badan, ayaa tartankan waxa uu hadda galay sannadkiisii ​​saddexaad, waxaana dariiqa loo mari doonaa sannadka 2021 uu noqonayaa kii ugu horreeyey ee ka socda koonfurta ilaa woqooyiga.
«Dhacdada sanadkan waa mid xiiso leh sababo badan dartood, oo ay ku jiraan safka cajiibka ah ee orodyahanada aadka u adag ee ka qayb qaadanaya,» ayuu yidhi Bühring. «Waxaan leenahay waddo cusub, wax yar oo kiiloomitir ah …
Entrada anteriorAnterior ▷▷ 2021 ▷ ¿Cuánto pesa Blanca Suárez?
Entrada siguienteSiguiente Pequeñas ideas de baño – Bob Vila